Didier R atsiraka : Manahy loza -
AccueilRaharaham-pirenenaDidier R	atsiraka : Manahy loza
Didier R	atsiraka : Manahy loza
Namoaka ny heviny mikasika ny fitoriana napetraky ny kandidà Tabera Randriamanantsoa ny HCC izay nilaza fa « ny HCC irery ihany no mahefa amin’ny ady mikasika ny fiantsona mpifidy amin’ny fifidianana filoham-pirenena ». Hamoaka ny didim-pitsarana mifandraika amin’io fitoriana koa anefa ny Filan-kevi-panjakana amin’ny talata ho avy izao. Manodidina izany indrindra dia naneho ny heviny tetsy amin’ny Carlton ny amiraly Didier Ratsiraka.
Manahy loza ho an’ny firenena eo anatrahen’izao zava-mitranga izao ny amiraly Didier Ratsiraka ka mangataka ny tokony hanemorana ny fanatanterahana ny fifidianana noho ny antony maro. Maro araka ny nambarany ny fandaminana tokony atao vao tokony hiroso amin’ny fifidinana, ohatra amin’izany ny fanisam-bahoaka, ny lalam-pifidianana, ny lalam-panorenana, ny bileta tokana. Nahoana hoy ity filoha teo aloha ity no tsy ampisain-dry zareo Amerikana, Alemana sy Japana ny bileta tokana rahatoa ka mahomby sy azo antoka ny bileta tokana.
Nokianin’ny amiraly ny daty hanatanterahana ny fifidianana amin’ny 7 Novambra 2018. Tsy mifanaraka amin’ny lalàm-pifidianana izay milaza fa tsy azo atao ny manatanteraka fifidianana anatin’ny vanim-potoanan’ny orana, hoy izy. Manoloana izay resaka fifidianana izay ihany, tsy voahaja amin’ny lafiny maro ny lalàna mifehy ny fifidianana raha tsy hiresaka afatsy ny fiantsoana mpifidy izay tokony natao 90 andro mialohan’ny fifidianana.
Nambaran’ny amiraly Didier Ratsiraka fa mampametra-panontaniana ny filazana hoe “tsy azo ivalozana ny HCC” kanefa ny mifanohitra amin’izany ny zava-nitranga ny taona 2001 namoahan’ny HCC ny voka-pifidianana izay nilaza ny tokony hanatanterahana ny fihodinana faharoa. Nasiany fanamarihana manokana ihany koa ireo fanapahan-kevitra maro navoakan’ny HCC, ohatra amin’izany ny fitsipaham-pitokisana izay namoahan’ny HCC fanapahan-kevitra ny hirosoana amin’ny “pacte de responsabilité”, ny fitakiana amin’ny fanesorana ny filoham-pirenena kanefa ny fifanarahana politika sy fanesorana ny praiminisitra indray no nisy.
Nisongadina nandritra ny fanambarana ntaon’ny amiraly dia ny fanankianany ny Fianakaviambe Iraisam-pirenena izay tsy mitàna ny teniny ary nampangainy ho anisan’ny tompon’antoka amin’izao fahavoazan’ny firenena izao. Notsindriany manokana tamin’izany ohatra ny sata mifehy ny SADC, ny Vondrona Afrikana, ny fifanarahana tany Cotonou ary ny fanaovan-tsonia izay natao tany Dakar ny taona 2002. Mazava tokoa mantsy fa tsy mahazo mandray anjara na mikarakara fifidianana ny mpanongam-panjakana kanefa mitazam-potsiny ny Fianakaviambe Iraisam-pirenena. Fehiny, manahy loza goavana amin’izao zava-misy mialohan’ny fifidianana izao ity filohan’ny antoko AREMA ity koa mangataka ny tokony hanemorana ny fifidianana satria be loatra araka ny nambarany ny zavatra ilàna fandaminana mba hirosoana amin’ny fiverimberenan’ny krizy.
Sambany teo amin’ny tantaran’ny hopitaly Soavinandriana no nahazo fitaovana hahafahana manao fandidiana fo. Hatramin’izay dia atsy amin’ny nosy La Réunion no akaiky indrindra raha sanatria ka misy fahavoazana ny fo dia na alefa any Inde ...Tohiny